महिला पुरुष जुन बेला लिप्त हुन्छन त्यहीबेला झुट बोल्छन | नेपालको सम्झना
Browse » Home » रोचक जानकारी » महिला पुरुष जुन बेला लिप्त हुन्छन त्यहीबेला झुट बोल्छन
महिला पुरुष जुन बेला लिप्त हुन्छन त्यहीबेला झुट बोल्छन
के तपाईं सोंच्नुहुन्छ कि तपाईको सहयात्री (पार्टनर) तपाईसंग सधैं सांचो बोल्छिन् या बोल्छन् ?खासगरी जब तपाई पार्टनरका साथ बिस्तरामा यौनकि्रयामा लिप्त रहनुहुन्छ । भलै, यो झूठ सबैकालागि लागुभने नहुन सक्छ । तर यहां साधारणतया बिस्तरामा सेक्सको समय बोलिने झूठहरुको चर्चा गरिएको छ । यसमा खासगरी तीन सबभन्दा ठुला झूठहरु छन् । आउनुस जानौं ती झूठहरु के हुन ?
1) तिमी सबभन्दा पहिलो/पहिली हौ !
‘तिमी नै पहिलो/पहिली हौ जससंग म यौन संपर्क गर्दैछु ।’ यो सेक्सका बेला बिस्तरामा बोलिने पहिलो झूठ हो । पुरुष र महिला दुबैमा यो लागु हुन्छ ।प्रायः दुबै यसप्रकारको झूठ बोलिदिन्छन् । यस कुरामा महिलाहरु केहि थोरै फरक हुन्छन् । महिलाहरु पुरुषहरुसंगको पछिल्ला सम्वन्धका बारेमा बताउनबाट बच्छन् । तर पुरुषहरु धेरैपटक यस्तो गर्दैनन् । यसकारण दुबै आआफ्नो सम्वन्ध लुकाउने चक्करमा भूलठ बोल्ने गर्छन् ।
2) तिमी निकै हट् छौ !
‘तिमी भन्दा हट् अर्को मैले कसैलाई पाएको छैन ।’ यो पनि एक ठूलो झूठ हो, जुन पुरुष महिला एकार्कालाई भन्ने गर्छन् । यस्तो झूठ त्यतिबेला बोलिन्छ जब साथीले ओवर एक्साइटमेन्टसम्म लैजान चाहदैन । यो एक साधारण कुरा हो कि कसैलेपनि यो भन्दैन कि ‘तिमी बढी सेक्सी त छैनौं ?’ तर मसंग तिमीबाहेक अर्को बिकल्प छैन । यस परिस्थितिमा एक्साइटमेन्ट प्राप्त गर्न महिला र पुरुषहरु दुबै यस प्रकारको झूठ बोल्छन् ।
3) मलाई निकै मज्जा आयो !
यस कुराको कुनै जरुरी छैनकि तपाईको साथी तपाईसंग सेक्सुअल रिलेशन स्थापित गर्दाका मौकामा आनन्दको अनुभूति गरॆको छ । तब त्यस्तो मौकामा ‘मलाई निकै मज्जा आयो या राम्रो लाग्यो’ भन्नुले कुनै माने राख्दैन । तपाईको साथीले यस्तो भन्नुको पछाडी एक कारण हुनसक्छ कतै तपाई साथीलाई बिस्तरामा एक्लै छोडी दिनुत हुन्न । साथै एक अर्को कारण यो पनि हुनसक्छ तपाईलाई उसले अपसेट गर्न चाहन्न या चाहन्निन् । यसकारण एक झूठको सहारा लिनु उसलाई सही लाग्न सक्छ । एजेन्सी
Posted by नेपालको सम्झना at 11:38 AM
2 comments to “महिला पुरुष जुन बेला लिप्त हुन्छन त्यहीबेला झुट बोल्छन”
jankaariko laagi thanks
रमाईलो पो लाग्यो त हौ मलाई त !!